China Stamping Robot Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
HY1010B-140 ndiro robhoti reYOOHEART rinonyanya kutsika zvitambi, rine compact dhizaini uye nekukasira kufamba rinomhanya rinobatsira kusimudzira budiriro uye Iva nechokwadi chekuchengetedzwa kwevashandi.
-Kureba kukuru kweruoko: 1400mm;
HY1010B-140 ndiro robhoti reYOOHEART rinonyanya kutsika zvitambi, rine compact dhizaini uye nekukasira kufamba rinomhanya rinobatsira kusimudzira budiriro uye Iva nechokwadi chekuchengetedzwa kwevashandi.Nezvakawanda zveAutomatic Stamping Production Line chiitiko, Yooheart inogona kubatsira mutengi kugadzira yakazara otomatiki yekugadzira mutsara, uye kuzviyedza iwe, uye pakupedzisira kupa murume wako dzidziso yakazara kuti mutengi ashandise.
Axis Max Payload Kudzokorora Capacity Environment Kurema
4 10 KG ±0.08 2.7 kva 0-45 ℃ Hapana hunyoro 60kg
±170° +10°~+125° +10°~-95° +360° Pasi/madziro/ceiling
Max Speed ​​​​J1 J2 J3 J4 IP level
20 zvikamu zveStamping robhoti yemuchina wekudhinda
Fekitori isina munhu: uchishandisa Yooheart robhoti batanidza muchina wekudhinda Fekitori yese inongoda kushandira 2 matekiniki.
4 Axis otomatiki stamping mutsara
Otomatiki kudzvanya mutsara uchishandisa robhoti
Sheet metal otomatiki kugadzira mutsara
Yakazara otomatiki robhoti sheet simbi yekutsikisa mutsara
Q. Unotumira murume wako kufekitari yedu kuti agadzirwe uye adzidziswe?
A, Kuti uwane mhinduro dzakakwana, isu tichatumira nyanzvi kune yako saiti kudzidziswa uye kugadzirisa, muripo wese unoenderana nemutengo wako.
Q. Ndeupi ruzivo rwandinofanira kupa kuitira kuti ugotipa chipo chekutsika robhoti?
A. Parobhoti yakajairwa stamping, tinogona kukupa iwe kana uchida kuziva.Asi kune otomatiki stamping yekugadzira mutsara, isu tinofanirwa kuziva rumwe ruzivo.Senge mangani Press muchina waunawo, modhi yavo uye yekubatanidza kutaurirana, nezvimwe.
Q. unogona kutipa mhinduro nezve stamping robhoti?
A. Chokwadi, tinogona kupa mhinduro iri nyore kuitira kuti iwe ugone kuziva rondedzero yebasa iri.
Q. Kana tichida mhinduro dzakakwana, mungatipa here?
A. Kuti uwane mhinduro dzakakwana, unoda kubhadhara izvozvo.
Q. rudzii rwePress muchina unogona kushandiswa otomatiki kugadzirwa mutsetse?
A. Muchina wekudhinda unofanirwa kutaurirana nerobhoti yedu, kuitira kuti masaini agone kugoverwa pakati pemuchina wekutsikisa nerobhoti.
Zvakapfuura: Robhoti inodhinda yePress Machine
Zvinotevera: Kutsikirira robhoti kune otomatiki dhizaini yekugadzira mutsara
4 Axis Stamping Robot Ye Press Machine